Uqhawulo-mtshato eOhio - Uqhawulo Mtshato Ngurhulumente
Uyilo Lokulala Dsigns
Uqhawulo-mtshato ngamava abuhlungu eentliziyo kwiintsapho. Ukufumana isiphatho kwinkqubo yezomthetho kunokukunceda ugcine intloko epholileyo njengoko usenza izigqibo ezibalulekileyo malunga nendlela yokuphelisa umtshato wakho. Ukufaka ifayile yoqhawulo mtshato eOhio, ubuncinci iqabane elinye kufuneka lihlale kurhulumente iinyanga ezintandathu okanye ngaphezulu. Ubuncinci iqela elinye kufuneka lihlale kwindawo apho isikhalazo siza kugcinwa khona ubuninzi beentsuku ezingama-90.
Izizathu zoqhawulo mtshato
I-Ohio ivumela uqhawulo mtshato olusekwe kwiziphoso kwaye olungenasiphoso. Uninzi lwabantu abatshatileyo bakhetha uqhawulo-mtshato olungenasiphoso, kuba alufuni ukuba ungene kuzo zonke izizathu zokuba kutheni umtshato usilele. Endaweni yokungena kwiinkcukacha zangasese, izibini zikhetha enye yezizathu ezibini ezingenaziphoso, ezibandakanya:
Ukuhlala ngokwahlukeneyo unyaka omnye
Ukungahambelani (okoko nje omabini amaqabane ayavuma)
Ukwabiwa ngokulinganayo koqhawulo mtshato
Ipropathi yoLuntu kunye nokuSinda
Nangona kunqabile ukuba kusetyenziswe, iOhio nayo ivumela iimpazamo ezininzi amabala , ezibandakanya:
Ukuba iqabane likhathalele uxanduva lwalo kwelinye iqabane
Ukuba umntu otshatileyo wayesele etshatile komnye umntu ngexesha lomtshato
Ukuba elinye iqabane lihamba kwaye alikho ekhaya ubuncinci unyaka
Inkqubo yoqhawulo mtshato
E-Ohio, ungawuphelisa umtshato wakho kwenye iindlela ezimbini . Ukuba wena neqabane lakho nifikelela kwisivumelwano kwangoko, ungafaka ifayile yokuchithwa, eyinkqubo ekhawulezayo, engabizi mali ininzi. Ngaphandle koko, kuya kufuneka uqhawule umtshato.
Umlingane ofaka isicelo kufuneka afake 'isikhalazo' soqhawulo-mtshato kunye nesamani kwinkundla yaseburhulumenteni.
Umlingane ofaka isikhalazo kufuneka afake isikhalazo kwiqabane eliphendulayo. E-Ohio, unako khonza iqabane lakho ngunothimba, iseva yenkqubo yabucala, okanye ngeposi eqinisekisiweyo.
Umlingane ophendulayo uneentsuku ezingama-28 zokufaka impendulo ebhaliweyo, okanye 'impendulo' kwisikhalazo. Kwamanye amazwe, iinkundla ziya kunika 'isigwebo esingagqibekanga' ukuba iqabane elingafayilanga liphendula. Umthetho waseOhio kuthintela izigwebo ezingagqibekanga Kumatyala oqhawulo-mtshato. Endaweni yoko, umntu ogcwalisa iqabane kufuneka anike ubungqina obonisa ukuba unelungelo lokuqhawula umtshato phantsi komthetho waseOhio. Umzekelo, umntu ogcwalisa iqabane kufuneka abonise ingqina elinokungqina ukuba amaqela abetshatile kwaye bahlala kunye njengendoda nomfazi. Ukuba iqabane elikhalazayo linokungqina zonke izinto eziyimfuneko kuqhawulo-mtshato, inkundla iyakugweba ngaphandle kokubakho komnye umntu.
Inyathelo lokugqibela kulo naliphi na ityala laseOhio loqhawulo-mtshato kuxa ijaji isayina ukungena kokuGweba kokugqibela kunye noMmiselo woQhawulo mtshato.
Ngexesha letyala, inkundla kufuneka yahlule ipropati yabalingane. I-Ohio yindawo yokuhambisa ngokulinganayo kwaye isebenzisa oku kulandelayo izinto Ukwahlula ipropathi yomkhosi:
indlela yokucheba iinwele ezinde ngemaleko enemifanekiso
Kude kube nini betshatile
Iimpahla zesibini kunye namatyala
Nokuba iyavakala na into yokuba unike ikhaya lomtshato kwiqabane elifumana ilungelo lokugcina abantwana
Ukuthengiswa kwempahla kusasazwa
Umnqweno wemali wokugcina ii-asethi zihleli
Iziphumo zerhafu kulwabiwo lwepropathi kwicala ngalinye
Iindleko zokuthengisa iiasethi, ukuba kukho imfuneko
Ukwabiwa kwepropathi amaqela ekuvunyelwene ngawo kwisivumelwano sokwahlukana
Izibonelelo zomhlala phantsi kwesi sibini
Naziphi na ezinye izinto ezifanelekileyo
Inkundla inokuthatha isigqibo sokuba elinye iqabane lifune inkxaso yemali kwelinye ukufezekisa iimfuno zalo ezisisiseko zokuphila. Phantsi komthetho waseOhio, iinkundla zijonga a Uluhlu lwezinto xa usenza isigqibo sokuba ulinike elinye icala inkxaso. Ukuba elinye icala licela inkxaso, iinkundla zaseOhio ziqwalasele oku kulandelayo:
Ingeniso yamaqela, iiasethi, kunye namatyala
Icala ngalinye lokufumana umvuzo
Izibonelelo zomhlala phantsi zomtshato
Nokuba icala elinye lihlala ekhaya nabantwana
Icala ngalinye lomgangatho wokuphila
Inqanaba lemfundo leqela ngalinye
Nokuba elinye icala lixhasa elinye ngelixa esenza izifundo eziphakamileyo
Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukuba iqabane elifuna inkxaso liqeqeshe ukuphinda lingene kubasebenzi
Inkxalabo ephambili yenkundla yoqhawulo-mtshato yaseOhio yeyona nto ibaluleke kakhulu kubantwana ababandakanyeka kumatyala oqhawulo-mtshato. Inkundla inoxanduva lokubonelela ngezemali, ezemfundo kunye neemvakalelo. Rhoqo, inkundla yenza imiyalelo yethutyana yokubonelela abantwana ngelixa ityala lisajongiwe. Imiyalelo yethutyana eqhelekileyo ibandakanya inkxaso yabantwana, undwendwelo, kunye nentsebenziswano phakathi kwabazali.
Iinkundla zaseOhio zikhetha ukuba bobabini abazali babelane ngoxanduva lokuba ngumzali. Nangona ukuba ngumzali okwabelwanayo akunakwenzeka kuzo zonke iimeko, iinkundla zisebenza neentsapho ukwenza iishedyuli zokundwendwela ezihlangabezana neemfuno zabazali bobabini. Iinkundla zase-Ohio zithathela ingqalelo oku kulandelayo xa zichonga ukwabelana ngomzali kufanelekile kwimeko:
Iminqweno yabazali kunye neyabantwana
Ubudlelwane bomntwana nabazali, abantakwabo, kunye naye nabani na onokuthi abenempembelelo kwezona mfuno zilungileyo zomntwana
Ukukwazi komntwana ukuziqhelanisa nekhaya kunye nesikolo
Impilo yengqondo nengokwasemzimbeni yabantu ababandakanyekayo
Nguwuphi umzali onokuthi ahambisane nemiyalelo yenkundla
Nokuba umzali usemva kwiintlawulo zenkxaso yomntwana
Nokuba umzali unetyala lokuxhaphaza umntwana
Nokuba umzali ulikhanyele elinye ixesha lokuba ngumzali
Nokuba abazali bamisele indawo yokuhlala
Ukukwazi kwabazali ukusebenzisana
Isakhono sabazali sokukhuthaza umntwana ukuba athande omnye umzali
Nayiphi na imbali yobundlobongela basekhaya
Umgama phakathi kwabazali
I-Ohio inemithetho ethile malunga nokuba abazali bahlawule malini ukuxhasa abantwana babo.
iikowuti zithetha emngcwabeni
Ukuthatha isigqibo soqhawulo mtshato
Uqhawulo mtshato linyathelo elikhulu. Unokuziva ngokungathandabuzekiyo ukuthandabuza ukuya phambili ngokugcwalisa isikhalazo. Kuhlala kungumbono olungileyo, ngakumbi ukuba unemeko enzima, ukubonisana negqwetha elinokukunceda ekukhokeleni kule nkqubo.
Iselula Phone Plans Abantwana' Toys Organic Ukulima Ne Gadi Isiselo Somdiliya Antique Tools Ne Hardware
Ulutsha Imiboniso Bhanyabhanya
Izinto Zokuthambisa Brands
ukhe wangumkhohlisi uhlala ekhohlisa uyinyani
umntwana ozelwe kwiiveki ezingama-30 imifanekiso
beka imali ezincwadini entolongweni
Ungadibanisa ntoni nejager
uyisusa njani itha ekhaphethini
ukuba uthumele ntoni emngcwabeni endaweni yeentyatyambo
Zonke Malunga Eherbs